Wed, Jul 8, 2020 at 4:27pm
देउवाको सरकारले खारेज गरेको रोपवे पुनः सञ्चालन हुदै
काठमाडाैं १९ माघ। कुनै बेला तराई तथा आयातित सामान हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसामान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको यो ‘रोपवे’लाई बागमती प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । रोपवे २०५६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुककै यातायातको इतिहाससँग जोडिएको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, “यो रोपवे..
राजविराज, १८ माघ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले कांग्रेस, नेकपा र मधेसी दलका नेताहरू म्याद गुज्रेको औषधि सरह रहेको बताएका छन्। शनिबार सप्तरीको राजविराजमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ३० वर्षदेखि ७० वर्षसम्म म्याद गुज्रेको औषधि खाएमा यसले कुनै फाइदा नगरी केवल नोक्सानी मात्र गर्ने बताएका हुन्। यी पार्टीले म्याद गुज्रेका औषधि सरह ‘रियाक्सन’ मात्र गर्ने र ज्यान जाने अवस्थामा पुर्‍याउने..
सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्यो : सभापति देउवा
बुटवल, १८ माघ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनताको अधिकार खोसेर अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको बताए। शनिबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा पुगेका सभापति देउवाले प्रेश स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारमाथि नै प्रहार गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको बताएका हुन्। दुई तिहाइको बलमा जनताको अधिकार खोसेर लोकतान्त्रको मूल्य र मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी विभिन्न विधेयकहरू ल्याएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादविरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर..
ईयूबाट बेलायत छुटिएपछि फेरिने र नफेरिने यी सात कुरा
लन्डन, १८ माघ तीन वर्ष, तीन प्रधानमन्त्री र दुई निर्वाचनपछि यूके अन्तत: शुक्रबार जनवरी ३१ जीएमटीअनुसार राति ११ बजे युरोपेली संघ ईयूबाट अलग्गियो। तर त्यसलगत्तै ब्रिटेन ११ महिना लामो सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ब्रेक्जिटले त्यसो भए के परिवर्तन भयो त? सङ्क्रमणकालमा यूकेले ईयूको नियम मानिरहनेछ र ईयूलाई तिर्नुपर्ने पैसा पनि तिरिरहनेछ। कति कुरा पहिलाकै जस्ता हुनेछन् भने..
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक : सचिवालयका कसैले पनि मुख खोलेनन्
१८ माघ, काठमाडौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल सकिएको छ । १५ वटा समूह र तीन आयोगसहित पाँच निकायले आफ्नो छलफलको निष्कर्ष पेश गरेको छ । अब बैठक भोलि आइतबार १ बजे बोलाइएको छ । स्रोतकाअनुसार भोलि नै बैठक सकिनेछ । केन्द्रीय कमिटी बैठक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)कै वरिपरि घुमेको छ र नेताहरुले सचिवालय सदस्यहरु पनि बोल्नुपर्ने माग गरेका..
भीम रावलले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरे १० बुँदे फरक मत (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ का नेता भिम रावलले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १० बुँदे फरक मत राखेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै पेश गरेको फरक मतलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि राखेका हुन् । उनले लिखित रुपमै फरक मत राख्दै नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई..
नेपाली विद्यार्थीको ’रेस्क्यु’ गर्न २ जहाज तयारी अवस्थामा छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, १८ माघ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको ’रेस्क्यु’ गर्न जहाज तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिबार पर्यटन बार्डमा कोरोना भाइरस र यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गर्न २ वटा जहाज तयारी अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । पराराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ सरकार र दूतावससँग प्रभावित..
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको प्रचण्डले गुट चलाएको लिखित आरोप
काठमाडौं, १८ माघ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुट चलाएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा २९ बुँदे लिखित सुझाव राख्दै थापाले पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको नाम नलिइ थापाले उनीलाई इंगित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने..
Results 9784: You are at page 37 of 327